I-Semalt Yabelana Ngamathiphu E-Vital Namathuluzi Ukulwa Namazwana we-WordPress Ugaxekile
Uma unesayithi lezindaba ezithandwayo noma ibhulogi, amathuba ukuthi uzothola amazwana amaningi ogaxekile nsuku zonke. Ngokujabulisayo, sifunde ukulwa namazwana ogaxekile ku-WordPress, futhi eziningi zezindlela zenziwe ngesikhathi. Uma u-newbie futhi ungazi ukuthi ungaqala kanjani, kufanele ukhumbule lawa mathiphu abalulekile namathuluzi okulwa namazwana ogaxekile ku-WordPress njengoba kuchaziwe ngu-Igor Gamanenko, isazi esesabekayo esivela ku Semalt .
1 - integrated intelligent security surveillance system. Yenza kusebenze i-Akismet plugin:
Kuphephile ukusho ukuthi i-Akismet ingenye yama-plugins adume kakhulu futhi ayigugu amawebhusayithi we-WordPress kanye nebhulogi. Awudingi ukulanda njengoba le plugin ifika ngaphambi kokufakwa kuwo wonke ama-akhawunti we-WordPress. Kodwa kuzodingeka ulungise izilungiselelo zayo ngokuvumelana nezidingo zakho ngesandla. I-Akismet iyithuluzi elithembekile kakhulu uma kuziwa ekuqedeni amazwana ogaxekile. Ihlunga ngokuzenzakalelayo amazwana angenamsebenzi futhi ikuvimbela ekushicileleni izinto zogaxekile kubhulogi yakho.
2. Yeka ukulandela amazwana Amazwana:
Ababhulogi abasha nabaphathi bewebhu bakholelwa ukuthi ukusebenzisa ama-plugin ukususa izimpawu ezingezansi ezivela kusixhumanisi somlobi wokuphawula kuphephile, kodwa akulungile. Eqinisweni, izixhumanisi ezingenalandeli nezokulandelana zibalulekile ekuthuthukiseni isikhundla se-injini yokusesha website yakho..Ngisho namazwana angewona ogaxekile athunyelwa ngabantu bangempela ukuze ungawavimbeli ngama-plugin ajwayelekile. Esikhundleni salokho, kufanele ususe ngesandla lawo mazwana abonakala engekho emthethweni kuwe. Uma ungasebenzisi noma yikuphi i-plugin mayelana nalokhu, hamba ku-tip yethu yesithathu.
3. Nciphisa ukuphawula kwe-Spam ngamakhukhi:
Le ndlela isebenza kuphela uma wazi ukuthi amakhukhi asebenza kanjani nokuthi angawasebenzisa kanjani. I-plugin yamazwana ye-Cookies ingenye yepholile kakhulu futhi yenza imisebenzi yakho yenziwe kalula. Iningi legaxekile kanye ne-bots ziyi-scripts ezenzakalelayo, futhi ungagcina isayithi lakho kubo ngokunciphisa inani lamazwana ogaxekile usebenzisa amakhukhi.
4. Vimbela amabhuzu wamazwana wogaxekile nge-Honeypot:
Ubuchwepheshe be-Honeypot ngenye yezindlela eziphumelela kakhulu uma kuziwa ekukhohliseni ama-spambots online. Okokuqala, kufanele ufake futhi usebenze i-plugin ye-WP-Spam Fighter. Uma usuqalisiwe, iya kuzilungiselelo ze-WP-Spam Fighter futhi ungakhohlwa ukuvikela ukuvikeleka kwe-honeypot. Ngokuqinisekile kuzovikela isayithi lakho kusuka kumazwana we-spam nama-bots nsuku zonke.
5. Engeza ukuqinisekiswa kwe-Captcha:
Ukwengeza ukuqinisekiswa kwe-captcha, ithuluzi elihle kakhulu yi-WP-reCAPTCHA. Ngalolu hlelo, ungenza kalula izinselelo ze-captcha kumafomu okuphawula, ukuvimbela abaduni nabagaxekile ukuba bakucasule nsuku zonke ngamazwana ogaxekile. Ngivumele lapha ngitshele ukuthi abantu kanye nebhodi bangakwazi ukufaka kuphela le captcha abakwazi ngisho nokubona amagama akhulunywa ku-captcha; Ngakho-ke, uzoqiniseka ukuthi isayithi lakho livikelwe ngamazwana angenalusizo kanye nogaxekile.
6. Khubaza Amazwana kuma-Okunamathiselwe Okumidiya:
Ingxenye engcono kakhulu ye-WordPress yukuthi izokwenza ngokuzenzakalelayo okunamathiselwe kwesithombe namakhasi lapho izivakashi zakho zikwazi ukubona izithombe bese zishiya imibono ngokwezifiso zabo. Lokhu kuzokuvimbela ngokuzenzakalelayo ukuthi ungatholi amazwana ogaxekile njengoba abantu bangempela bazoxhumana newebhusayithi yakho. Ungakhubaza amazwana kumafayela wakho wezindaba, okuqukethwe kanye nezinamathiselo ezifanele. Ukuvala lawo mazwana kuzosindisa iwebhusayithi yakho ye-WordPress kusuka kubagaxekile nabaqaphi.